Serasera.org - Blog: Serasera 3/10/1999 - 3/10/2009
Serasera 3/10/1999 - 3/10/2009
Folo taona izay no nitsirian'ny hevitra hanangana vondrona iray antsoina hoe serasera. Hampifandray ny Malagasy manerana ny tany amin'ny alalan'ny haitaon'ny internety. Maro ny hetsika eritreretina hatao mandritra izany dingana lehibe izany izay holazaina etsy ambany ny andinindininy.
Folo taona aty aoriana tokoa mantsy dia mamondrona takelaka am-polony, sy malagasy an'aliny ny serasera.org. Takelaka noezahina hatrany hifototra amin'ny maha Malagasy. Endrik'izany fandalàna ny maha Malagasy izany ny nametrahana hatrany am-boalohany ny hitenenan'ny takelaka rehetra eto amin'ny serasera ny teny malagasy. Azo atao hoe tanteraka ihany izany na dia eo ihany aza ireo takelaka vitsy izay voatery natao teny vahiny noho ny haitao ao anatiny tsy mbola voafehy amin'ny tenindrazana. Noezahina nolalaina hatrany koa ny foto-pisainana maha Malagasy ao anatin'ny fanajana ny firaisan-kina sy ny fihavanana, na dia voatery nampifanolana aza izany matetika. Koa mino aho fa nitondra "maha Malagasy" kely tao anatin'ny tsirairay ny ezaka efa natao sy mbola hotohizana hatrany eto amin'ny serasera.
Tsy ho sasatra hatrany angamba ny serasera misaotra antsika tsirairay nandritra izay folo taona niarahana izay ary misaotra sahady ihany koa amin'ireo taona maro mbola hifanatrehana eto. Isaorana ireo namana tsy nahafoy hatrany am-boalohany izay nanohana hatrany. Tsy tamin'ny fampitaovana ihany, toy ny vola, fitaovana isan-karazany, fa hatramin'ny toro-hevitra sy ny fankaherezana tsy tapaka. Ireo namana izay fanovozan-kevitra vaovao, sy ireo izay "mpanandrana" ny tolotra rehetra haseho vahoaka. Misy tokoa mantsy ireo anontaniana antsisiny ny zavatra rehetra havoaka ho hitan'ny olona, alohan'ny tena hamoahana azy. Na ny loko, na ny endrika, na ny votoatiny. Ireo namana izay tsy tapaka manontany isanandro izay mety hanampiana... ary dia manampy tokoa. Ireo namana izay mampiely sy manaparitaka ny serasera amin'ny namany hafa... isika rehetra izay mampiasa tsy tapaka na tsindraindray ny serasera. Ary ireo mpiara-miasa izay mbola miara-miasa akaiky aminay amin'ny famelomana ireo takelaka rehetra eto amin'ny serasera. Isaorana daholo ianareo ary mbola mirary fiarahana maharitra hatrany.
Inona no hetsika 2009?
Misy vinavina vitsivitsy izay efa kotrehina amin'izao fotoana izao. Ny goavana indrindra angamba dia izay iarahan'ny serasera.org sy ny telomiova.org hankalazana manokana izany faha 10 taona izany. Haroso ho antsika tsikelikely eo ihany ny andinindininy. Ny ankoatr'izay amin'ny maha maneran-tany ny serasera.org dia ho henontsika miandalana eo ny fankalazana sy fihaonana isaky ny toerana. Tsy ho latsa-danja amin'izany ny ao Madagasikara izay ahitana ireo ao amin'ny fikambanana Namana Serasera Dago. Ho hita miandalana ao amin'ny Dinika momba ny Fety sy fihaonana ny filazana sy ny hetsika rehetra.
Mankaiza ny serasera?
Ny serasera.org dia takelaka tsy mety vita tanteraka :-). Miankina be dia be amin'ireo namana izay mampiasa azy ny fivoarany. Miankina be dia be amin'ny mpitsidika ihany koa izany ny fivoarany. Raha manana soso-kevitra dia azontsika atao hatrany no mandroso izany. Raha mieritreritra hanampy koa dia tsy mandà fanomezana izahay.
Manana anjara lehibe eo amin'ny fanabeazana ho olom-pirenena matotra ny serasera.org. Tsy voatery hirona amin'ny atsy na ny aroa fa kosa mirona amin'ilay soatoavina maha Malagasy mandàla hatrany ny fihavanana sy ny fifankatiavana. Efa nambara ombieny ombieny fa tsy manao politika ny serasera.org saingy miezaka kosa mampita izay fanabeazana ho olom-pirenena matotra izay, izay inoako fa ilain'ny rehetra na izay ho mpitondra na izay ho mpanohitra.
Izay ary fa dia mirary 10 taona manaraka ho antsika indray.
Publié par Eugene Heriniaina à 7/21/2009 10:14:00 AM
Libellés : serasera, tantara
Pao-tsatroka ho an'i Hery manokana (sy izay olona tsy fantatro niasa sy nanampy tao ambadika) nitoto nahafotsy ny nahandro nahamasaka ny serasera.
7/21/2009 11:43:00 AM
fahamarinana a dit…
Dia miarahaba tratra ny fety dia mbola tsy mitsahatra maneho ny fisaorana anareo mpandrindra sy mpikarakara sy mpikaon-doha ihany koa !
Soa ny fiarahan-tsika e,soa koa ny namana hitako sy fantatro teto ary indrindra ny dinika nifanaovana tetsy sy teroa !
Mirary ny hitohizany hatrany dia mirary soa anareo !
tsiky sy kiss dia ampy avy amin'ny Faha o !!!
Dia miarahaba no misaotra an'i Hery manokana aloha nitoto nahafotsy, nahandro nahamasaka!
tompon'andraikitra voalohany ity "seraserantsika" ity, misaotra
nampifandray ny gasy eran-tany satria tena nilaina izany!Ary mbola
andrandraina aza ny hiroboroboan'izany, misaotra ireo
mpiandraikitra hafa fantatra na tsia , ireo nanampy sns na nivantana na t@ fomba hafa, ary indrindra misaotra ireo namana nikolo t@ fanehoana hevitra isan-karazany! Dia mianjy gatô ô! arahin'i lé hira wè " Arahaba tratry ny faha10 taona i Sera" miverina in'efatra izany vao miato!
7/23/2009 10:42:00 PM
dia mankasitraka hatrany e! tsy mahita teny ambara ankoatry ny fisaorana anao ry Hery ann, ho ambinin-java manasatra anie e!
7/28/2009 03:11:00 PM
Diloo a dit…
Miarahaba sy mankasitraka an'i Hery sy ny mpanampy azy nametraka ity serasera ity ho an'ny malagasy eran-tany, efa ho folo taona sahady izay.
Bon anniversaire daholo izany na ny mpomba na tsy ny mpomba ny hevitra tsy mitovy, eny na dia ireo matsim-bava tsy manaja ny samy mpisera ao amin'ny sehatra ny politika:tsy tia fanabeazana ho olom-pirenena matotra.
Félicitation fa eto amin'ity serasera ity no teny misy ary afaka mihaina ny atao hoe plateforme de la démocratie intellectuelle, izay afahan'ny ireo mety ho vendrana na tsia manao ny ady hevitra politika.
Bon anniversaire Pikatti, Noue, Fijo,sns.
9/14/2009 05:53:00 PM